true integrity /zu-ZA/tools-for-life/integrity/steps/good-and-evil.html read 3 11 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/integrity_zu_ZA.jpg UbuQotho NokweThembeka
Lapho umuntu enza okuthile okulimazayo okuphula i-moral code avumile kuyo, lokhu kubizwa ngokuthi isenzo se-overt noma, ngokumane, i-overt.
Lesi isenzo esilimazayo umuntu asenzele yena, umndeni wakhe, iqembu lakhe, noma iyiphi enye into ephilayo noma izinto noma impahla.
I-overt into eyenziwa ngumuntu ongeke afune ukuba yenzeke kuye.
I-overt ingenziwa ngenhloso noma ngengozi.
Ama-overts akufanele abe makhulu. Into elula njengokukhombisa ukufika sekwephuzile noma ukungawenzi umsebenzi wobuchwepheshe kuyi-overt. Ama-overts nawo angafaka nemishini yokulimaza, ukufihla izinto kumphathi wakho, ukuthatha izidakamizwa ezingekho emthethweni, ukuphuza ngenkathi ushayela noma ngenye indlela wephula umthetho.
I-overt yinto umuntu angayenzanga obekumele ayenze.
Isibonelo, ukubona ingane isizoshaya ingane encane futhi ungayimisi noma wenze okuthile ngakho, kodwa esikhundleni salokho uhambe ngenye indlela, kungaba i-overt act.
Ngakho-ke i-overt act akukhona nje ukulimaza othile noma okuthile. I-overt act ukwenza okuthile (isenzo sekhomishini) noma ukungenzi okuthile (isenzo sokushiya) okwenza okuncane okuhle ngenani elincane labantu noma izindawo zokuphila noma elimaza kakhulu inani elikhulu kakhulu labantu noma izindawo impilo. Lokhu kungafaka umndeni womuntu, noma iqembu neSintu sisonke.
Abantu abaningi bacabanga ukuthi noma yisiphi isenzo sokubhubhisa siyi-overt nje ngoba siyabhubhisa. Kubo, zonke izenzo ezonakalisayo noma okungekho kuzo ama-overt acts. Lokhu akulona iqiniso. Ukungabhubhisi okuthile kungaba i-overt act. Isibonelo, inyoka enobuthi esondele ukuluma ingane encane kufanele ilinyazwe ukuze isindiswe ingane. Usizo lwento elimazayo noma umsebenzi owonakalisayo nawo ungaba i-overt act, njengokusiza abaphangi ukuba kude namaphoyisa.
Isenzo esizuzayo yinto esiza kakhulu. Kungaba isenzo esizuzisayo ukulimaza okuthile okungaba yingozi kubantu abaningi nasezindaweni zokuphila.
Umqondo wokungalimazi lutho futhi usize yonke into yinke iyahlanya. Ukusiza abantu abenza abantu izigqila zabanye ngeke kuthathwe njengesenzo esizuzisayo ngakho-ke kungaba i-overt act. Kodwa ukubhubhisa isifo kungaba yinzuzo ngakho-ke akuyona i-overt.
I-overt umuntu ayenzile kepha angakhulumi ngakho noma engatshelanga muntu kubizwa ngokuthi i-withhold. I-withhold ihlale iza ngemuva kwe-overt.
Isibonelo, owesifazane oweba imali kumqashi wakhe wenza i-overt. Ube-ke engatsheli muntu ngakho, okwenza i-withhold.
Ngoku-wittholder i-overt, kwenzeka okuthile okuthakazelisayo kubantu: bayeka ukuxhumana nomuntu noma izinto abazilimazile bese begcina be-withholder (ukusuka noma ukudonsa emuva) ezindaweni ababekade basebenza kuzo.
Kwi-Scientology, manje sekunamathuluzi okuxazulula izinkinga ezethulwe ama-overts nama-withholds, okwenza abantu baphinde bazizwe beyingxenye yeqembu futhi babuyisele ukwethembana nobungane babanye.